यी नायिका जो बिहेभन्दा पहिले गर्भवती थिए ! - Purbeli News
यी नायिका जो बिहेभन्दा पहिले गर्भवती थिए !
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर २९, २०७३ समय: ११:४९:५२
एजेन्सी । बलिउड चलचित्र उद्योग आफ्नो भन्नै नपर्ने करामतहरूको लागि परिचित छ । बिहे गर्नु वा नगर्नुले फिल्मस्टारका लागि खासैै अर्थ राख्दैनन् । धर्म, जाति, सम्प्रदायले यहाँ कुनै माइने राख्दैनन् यहाँ हरेकले हृदयबाटै अपनाउँछन् । यहाँ कुरा गर्दैछौं ती बलिउड नायिकाको जो बिवाह पहिले गर्भधारण गरेका र बलिउडले उनीहरूलाई खुल्ला हृदयले स्वीकार गरेको थियो ।
श्रीदेवी – श्रीदेवीले सार्वजनिकरुपमै स्वीकार गरेकी छन् की उनी विवाह पहिले नै गर्भवती थिइन् । श्रीदेवीले जब बोनी कपूरसंग विवाह गरिन, त्यतिखेर उनी गर्भवती थिइन् । उनीहरूको १९९६ मा विवाह भएको हो र छोरी जाह्नवीको जन्म भएको हो ।
महिमा चौधरी – नायिका महिमा चौधरीले सन् २००६ मा एक नीजी समारोहमा बबी मुखर्जीसंग विवाह गरिन् । एक रिपोर्टका अनुसार उनी विवाहको समय गर्भवती थिइन् । विहेको केही महिनामै उनले छोरीलाई जन्म दिएकी थिइन् । तर, यो घटनाले सबैलाई अचम्म बनाएको थियो ।
काेंकणा सेन शर्मा – कोंकणाले सन् २०१० मा नायक रणवीर शौरीसंग विवाह गरेकी थिइन् । शौरी र कोंकणा लामो समय संगै रहेका थिए । सन् २०११मा कोंकणाले छोरा जन्माइन् । भनिन्छ गर्भवती भएकै कारण उनीहरूले चाडै विवाह गरेका हुन् तर, कोंकणा यसलाई कहिल्यै स्वीकार गर्दिनन् ।
अमृता अरोडा – नायिका अमृता अरोडाले सन् २००९ मा व्यापारी शकिलसंग विवाह गरिन् । विहेको केही दिनमै उनले आफू आमा बन्न लागेको घोषणा गरेकी थिइन् । सञ्चार माध्यम भन्छन् ‘उनी विहेअघि नै गर्भवती थिइन्
सेलिना जेटली – मिस इन्डिया सेलिना जेट्ली विवाहअघि देखिनै आफ्नो पति पिटर हागसंग डेट गरिरहेकी थिइन् । उनी पनि विवाहअघि गर्भवती भएर पछि विहे गरेकी नायिकामा पर्दछिन् । सन् २०१२ मा उनले जुम्ल्याहा छोरा जन्माएकी थिइन् ।
नीना गुप्ता – बलिउड र टिभी शोकी नीना गुप्ता चिरपरिचित नाम हो । उनी यस्तो हिम्मतवाली नायिका हुन् जसले विहेअघि नै सन्तान जन्माउने कुरा खुलेआम वताउँथिन् । उनी क्रिकेटर विवियन् रिचर्डस्संग रिलेशनसिपमा थिइन् । घोषणा अनुसारै उनले १९८९ मा छोरी मसाबालाई जन्म दिएकी थिइन् ।
सारिका – नायिका सारिका दक्षिण भारतीय नायक कमल हसनलाई मन पराउँथिन् । कमल हसन पहिलेनै विवाहित थिए । उनले पहिलीसंग डिभार्स गरे र सारिकासंग बस्न थाले । सारिकाले १९८६ मा छोरी श्रुती हसनलाई जन्म दिएकी हुन् भने उनको विवाह १९८८ मा भएको होे ।